संसद विघटनको मुद्धा : रिट निवेदक पक्षको ८ घण्टा बहस समय बाँकी ! - Kantipath.com
संसद विघटनको मुद्धा : रिट निवेदक पक्षको ८ घण्टा बहस समय बाँकी !
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ जना सांसदको रिटमा बुधवार ५ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा, महादेव यादव, अधिवक्ता खम्बबहादुर खाती र गोविन्द शर्मा बन्दीले ४ घण्टा बहस गरेका छन् ।
बिहिबार बरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, रमन कुमार श्रेष्ठ, शेर बहादुर केसी, अधिवक्ता डा. दिनमणी पोखरेल, बरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्ट, वोर्णबहादुर कार्की लगायतले बहस गर्दैछन् । शुक्रबार अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई, सुनिल पोखरेल र भिमार्जुन आचार्यले बहस गर्नेछन् ।
बुधवार गोविन्द शर्मा बन्दीले ४० मिनेट बहस गरे । अधिवक्ता खातीले २० मिनेट, बरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले आधा घण्टा, बरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले १ घण्टा र शम्भु थापाले १ घण्टा ३० मिनेट बहस गरे । रिट निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीले ८ घण्टा सुरुवाती बहस गर्न पाउनेछन् ।
रिट निवेदकका लागि संवैधानिक इजलासले सुरुवाती बहसका लागी १२ घण्टाको समय दिएको छ । सरकार पक्षको बहस सकिएपछि निवेदक पक्षले थप ३ घण्टा प्रत्युत्तर लगाउन पाउने गरी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले समय तोकेको छ ।
Previous Previous post: जनताको जग्गामा १९ वर्षपछि करोडौँको आधुनिक बसपार्क निर्माण
Next Next post: कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थीले निःशुल्क पाठ्यपुस्तक पाउने